Baomba – Midi Madagasikara
Ambatobe : Nahitana baomba tao anaty “sachet”
Redaction Midi Madagasikara 3 mars 2014 Ambatobe, anaty “sachet”, Baomba
Vao maraina dia efa nisavorovoro ny olona tetsy Ilafy-Ambatobe. Ny anton’izany dia ny nahitana fonosana iray tsy mitovy tamin’ireo rehetra izay nahitana baomba hatramin’izay. Nitangorona ny olona ary niantso mpitandro ny filaminana. Rehefa nozahan’ny manam-pahaizana dia korontana “fil” no tao anatiny , niaraka tamin’ny tavoahangy feno fotaka. Ankoatr’izay dia nisy “batterie” kely iray ihany koa…
Manjakaray : Baomba hita teo am-bavahadin’ny FJKM
Redaction Midi Madagasikara 25 février 2014 Anosy, Baomba, FJKM, Manjakaray, Rasalama Maritiora Manjakaray
Miverina indray ny fametrahana ireny karazana baomba vita gasy ireny eto an-drenivohitra Omaly vao maraina be, vehivavy mpivarotra iray handeha hamoha tsena no nahamarika baoritra iray napetraka teo akaikin’ny vavahadin’ny FJKM Rasalama Maritiora Manjakaray. Tokony ho tamin’ny 5 ora latsaka tany ho any. Teo am-pamafana ny manodidina ny fivarotany izy no nahita io zavatra io.…
Antanimena : Baomba sandoka nampisahotaka ny mponina
Redaction Midi Madagasikara 12 février 2014 Anosy, Antanimena, Baomba, moto, polisy, Tsaralalàna
Tsy natao ambanin-javatra ny fahitana ilay sakaosy nampiahiahy. Omaly tokony ho tany amin’ny 11 ora tany ho any, nisahotaka ny teny Antanimena fa nisy sakaosy nampiahiahy teo amin’ny sisin-dalana ampitan’ny fivarotan-dasantsy Total. Ny voavao vaoray no nahalalana fa tamin’io maraina io, nisy olona nitondra moto naniraka ankizy iray hanatitra sakaosy ao amin-dry Masera. Nomeny vola…